Awoodda hal, laga yaabo in qaabka ugu yaabka dabiiciga ah yahay awooda hal. Nooc kasta oo nool ayaa leh doorka muhiimka ah ee dabiiciga ah. Sidaa daraadeed, mid kasta oo naga mid ah ayaa naga caawin kara badbaadinta nooca hooyada.
Sidaa awgeed, Ururka Jaalliyadaha Jaalliyadeed ee Jooga ayaa ah in ilaalinta dabiiciga ah ee waxtarka leh la gaari karo oo keliya iyada oo loo marayo xiriir toos ah oo u dhaxeeya dadka iyo dabeecadda
Ururka Jabbuuti Nature / BirdLife Partner Partner, waa urur madaxbannaan oo aan madaxbannaaneyn oo xubin ka ah ururada aan dawliga ahayn ee Jabuuti. Hadafkeedu waa in uu gacan ka geysto dadaalka ilaalinta, maareynta waara iyo soo kabashada dabeecadda iyo hagaajinta hab nololeedka dadka Jabuuti. Si taas loo gaaro, Jabhadu wuxuu la shaqeeyaa beelaha maxalliga ah, hay’adaha dawladda iyo kuwa kale ee danaynaya inay kor u qaadaan wacyiga iyo muujinta ilaalinta dhaxalka dabiiciga ah ee waddanka ee faa’iidada jiilalka hadda iyo mustaqbalka.
Sida BirdLife Partner Partner, Jabuuti Dabeecadda waxay u dhaqantaa sida ugu sareeysa ee avifauna ee Jabuuti. Sidaa oo kale, hawsheeda waxay xooga saartaa noocyada Caalamiga ah ee Halista ah iyo Meelaha Dabiiciga ah ee Dabiiciga ah sida Francitus Dhibaatada Khatarta ah ee Jabuuti, oo ah noocyada keli ah ee shimbiraha ee Jabuuti iyo Dooxada Forêt (shimbir muhiim ah iyo aaladda biiyo kala duwan ee IBA-yada) ee noocyada noocan ah, laakiin sidoo kale xayawaanka kale ee halista ah, sida Livistona carinensis, Dracaena ombet, xayawaanka Masar, iwm …. Jabuuti waxay sidoo kale ilaalineysaa, oo ah urur bulsho oo firfircoon, waxaana ay muujineysaa sida ay uga go’an tahay ilaalinta dabeecadda iyo dadka ku nool nolol-maalmeedkooda ku dhawaad ​​14 sano ka dib markii la aasaasay 1999-kii.